नेपाली भाषा शुद्धीकरणको आग्रह | डा. विष्णुप्रसाद पौडेल
भाषा परिवर्तनशील वस्तु हो । सामाजिक गतिशीलतासँगै यसमा परिवर्तन हुँदै जान्छ । यसको खास प्रयोजन विचार विनिमय गर्नु हो । कुनै पनि भाषा प्रयोक्ता, विषय र परिस्थितिको भिन्नताका कारण फरक फरक हुन्छ । नेपाली विषय पढाउने व्यक्ति यस भाषाको आधिकारिक प्रयोक्ता ठानिनु स्वाभाविकै हो । उनीहरुले प्रयोग गर्ने भाषा सर्वत्र व्याकरण सम्मतै हुनु पर्छ भन्ने कुरा सुन्दा ठिकै लागे पनि व्यवहारमा त्यस्तो पाइँदैन । त्यस्तो हुनुको पहिलो कारण त यसको व्याकरणको फरक फरक मान्यता हुनु हो । यसलाई करिब एक दशकसम्म जनबोली निकट बनाई समय सापेक्ष सरलीकरण गर्ने भनी केही नयाँ नियम बनाएर प्रयोगमा ल्याइयो । सोही अनुसार पाठ्यक्रम निर्माण, पाठ्य पुस्तक लेखन र अध्यापन गरियो । साथै सोही अनुसार अनेक शोध प्रतिवेदनहरु निर्माण पनि गरियो । तर व्यक्ति विशेषको टसलले र केहीको लहडका कारणले फेरि तर्कहीन ढङ्गमा त्यसलाई पुरै उल्ट्याएर पुरानै स्थितिमा लगियो । यस्तो गर्दा ती ८/९ वर्षदेखि नयाँ नियममा हिँडेका शिक्षक र तिनले हिँडाएका विद्यार्थीको अवस्था कस्तो होला भन्ने सोचिएन । निश्चित स्वार्थवश राजनीतिक आडमा गरिएको निर्णय मान्न बाध्यकारी बनाइए पनि त्यो धेरैका लागि मान्य बनेको छैन । त्यसैले पदयोग र वियोग अनि तद्भवीकरणका क्षेत्रमा यस्ता समस्या बढी नै देखिएका छन् ।
दोस्रो कारण प्रयोग कर्ताको परिस्थितिका कारण पनि भाषा भिन्न हुन्छ । एकै शिक्षकले एउटै विषय कक्षामा पढाउँदा र कक्षा बाहिर विद्यार्थीहरुलाई सम्झाउँदा औपचारिक र अनौपचारिक शैलीको प्रयोग गरेको हुन्छ । यसले भाषाको स्वरूप पनि भिन्न बनाउँछ । सामाजिक सञ्जालमा औपचारिक भन्दा अनौपचारिक शैलीको प्रयोग बढी देखिन्छ । त्यसैले त्यसमा प्रयोग गर्ने नेपाली विषयका केही शिक्षकका भाषा पनि कतिपय अवस्थामा शुद्ध भन्दा पनि विचार सञ्चार गर्न सक्ने बनेर प्रकट भएको देखिन्छ । जस्तै–
ख. वरिष्ठ समालोचक, निबन्धकार, कवि तथा नेपाली केन्न्द्रीय विभाग कीर्तिपुरका पूर्व विभागीय प्रमुख प्रा. राजेन्द्र सुवेदीको कोरोनाको संक्रमणबाट भएको दुखद निधनबाट स्तब्ध भएको छु । श्रद्धेय गुरुप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जलि र शोकसन्तप्त परिवारप्रति हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछु ।
माथिका उद्धरणहरु नेपाली विषयका प्रतिष्ठित निवृत्त प्राध्यापक डाक्टरहरुका फेसबुकका भाषा हुन् । पहिलोमा पूर्ण विरामका सट्टा संयोजक र स्त्रीलिङ्गी शब्दान्तमा ह्रस्व लेखिएको छ । त्यस्तै विस्मय बोधक शब्द अघि स्पेस पनि छाडिएको छैन । दोस्रोमा केन्द्रीयमा न् बढी छ भने तत्सम शब्दमा पञ्चम वर्ण प्रयोग गर्ने नियम मानिएको छैन । त्यस्तै वाक्य टुङ्गिए पछि पूर्ण विराम पनि राखिएको छैन । अघिल्लोमा “शोक सन्तप्त”मा पद वियोग छ भने पछिल्लोमा पदयोग । यी समस्या नै होइनन् म भन्दिनँ तर “बढाले जो ग–यो काम हुन्छ त्यो सर्व सम्मत” जस्तो पनि छ । यस्तै त्रुटि अलि हैसियत बनाइ नसकेकाले गरे भने केही स्वनामधन्य शुद्धीकरणका अभियन्ताले त्यस्ता शिक्षकहरुको दोहोलो काढेर आफ्नो श्रेष्ठताको हुँकार गरेको देख्छु । त्यसमा स्याल हुइयाँ मच्चाउने पनि चर्कै देखिन्छन् । मलाई यस्तो कर्म “काम पाइनस् बुहारी .....” भने जस्तो लाग्छ । किनभने म त्यस्तो अंश मूलभाव बोधका दृष्टिले मात्रै पढ्छु । त्यसको स्तरीय मानक रूपमा खासै चासो दिन्न । किनभने त्यसको प्रयोजन वक्ताको भाव सञ्चार मात्रै हो ।
तेस्रो कारण भाषा मानक संरचनाले मात्रै बाँच्ने होइन; त्यसमा अन्तर्निहित विचार र संवेदनाको घनत्वले बाँच्ने हो । हाम्रा प्रयोगवादी स्रष्टाहरुको त कुरै छाडौँ, लेखनाथ, सम, देवकोटा जस्ता स्रष्टाका पाण्डुलिपि हेर्ने हो भने पनि उनीहरु विचार र संवेगलार्इ छाडी मानक अमानक भाषामा कहिल्यै अल्झिएनन् । त्यो काम प्रकाशकले प्रुफ रिडरलार्इ नै जिम्मा दियो । अहिले पनि नेपालीका धेरै लेखकहरु राम्रो प्रुफ रिडरलार्इ जिम्मा दिएर तपसिलको कर्म टुङ्ग्याउँछन् तर यसका आधिकारिक प्रयोक्ता ठानिने हामीहरु विचार र संवेदनाशून्य बन्दै गएर यस्ता तपसिलका कुरामा मात्रै बढी अल्झिएका हौँ कि जस्तो पनि लाग्छ । अनि उराठ केमा पनि लाग्छ भने विशुद्धताको हुँकार गर्दै अरुलार्इ चर्को उपदेश गर्नेहरुकै भाषा उनीहरुकै मानक व्याकरण अनुसारको पनि देखिन्न । जस्तै–
२. मर्म+आहत=मर्माहत । 'मर्माहित' होइन ।नेपाली भाषासाहित्य पढाउने गुरूहरूले त बुझेर प्रयोग गरौं न हौ!
४. साहित्य र भाषा पढेको न हो । विद्यार्थीहरूले शुद्ध प्रयोग गर्ने हो नि प्राध्यापक र शिक्षकहरूले किन गर्न पर्यो ? परोपदेशे पाण्डित्यम् न हो । जब बौद्धिकता पसलमा बिक्री हुन्छ तब भाषाको स्तर नामेट हुन्छ भन्ने सिद्ध पुरूषहरूको उक्ति सार्थक हुँदै छ सर ! (कपी पेस्ट गर्दा पनि द्यको संयुक्त रूप यस फन्टमा परिवर्तन भएर आएको छ । “पर्यो” र “पुरूष” विचारणीय बनेका छन् ।)
माथिका पछिल्लो बाहेक सबै उद्धरण हिजोको फेसबुकबाट लिइएका हुन् । पछिल्लो भने अस्तिको हो । यी सबै उद्धरण आजीवन नेपाली भाषा साहित्यमा समर्पित विश्वविद्यालयका धेरै जिम्मेवार ठाउँमा रहेका प्राध्यापकहरुका हुन् । कतिपय त मेरा सहपाठी र सहकर्मी मित्र पनि हुनुहुन्छ । के उहाँहरुले अज्ञानताका कारण अशुद्ध भाषा लेख्नु भएको हो त ? अवश्य होइन । अलिकति प्रमाद होला तर धेरै गाँठी कुरो यस भाषालार्इ बहु स्वीकार्य ढङ्गमा सरलीकरण नगर्दा नै यस्तो भएको हो । मेरा आदरणीय गुरुहरु र सहकर्मी मित्रहरुबाट हुने गल्ती मबाट पनि हुन्छन् । अझै धेरै भएका होलान् । मैले यो चर्चा उहाँहरुलार्इ खिस्याउन वा अपमानित गर्न पटक्कै गरेको होइन । त्यसैले स्रोतव्यक्ति पनि त्यहाँ उल्लेख गरिनँ । तर ती सबै देखिएका तथ्य हुन् । मैले त व्यक्तिमा होइन यस भाषाले सहज निकास नपार्इ ठिँगुरिएको संरचनामा समस्या देखेको छु; साथै हाम्रो भाषा पाठ्यक्रममा पनि । त्यसैले यस्ता समस्या जन्मिएका हुन् ।
होइन भने आजीवन यसमै लागेर पनि हामी शुद्ध लेख्न किन सक्दैनौँ ? अनि अरुलार्इ के भन्ने ? अब अरुले अशुद्ध लेखेनन् भन्ने नैतिक हैसियत नै हामीमा छ त ? अब पनि यो हामीले नै गिजोलेर बनाएको समाधान रहित समस्या हो भनेर सोच्ने कि नसोच्ने ? समाधान संस्कृत व्याकरण पल्टाएर होइन भाषा वैज्ञानिक चेत सहित जनबोली निकट बन्न थाल्दा हुन्छ जस्तो लाग्छ । समाधानको दायित्व अब हाम्रो काँधमा आएको छ । सहिष्णु र संश्लेषणकारी दृष्टिले गमौँ । अन्यथा हामी सबै नेपाली भाषाका लागि असान्दर्भिक प्राणी बनिरहेका हुने छौँ । सबैलार्इ चेतना भया ।